महरा सर, रोशनीलाई ‘मोहरा’ बनाउने को थियो ? उनीमाथि षड्यन्त्र नै भएको हो भने उनले यसबारे जनतामा के भन्छन्, कस्तो कदम चाल्छन् जस्ता कुराले उनको बाँकी राजनीति कस्तो हुने भन्ने कुराको निरिक्यौल गर्नेछ ब्लग५ फागुन २०७६
शाेकमा डलर देख्ने युट्युबर केही युट्युबरले यसलाई ‘डलर तान्ने मेसो’ बनाएका छन् । भन्नेले भन्लान्, ‘सिसाको घरमा बसेर अरुलाई ढुंगा हान्दैछस्’ । तैपनि, युट्युबतिर आएका हेडलाइन पढेपछि चुप लागेर बस्न मनले मानेन । फेरि, यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार वा टिप्पणी हो ब्लग२७ माघ २०७६
बाँसुरीवाला प्रधानमन्त्री ! सन् ६४ मा जब रोम आगोमा जलिरहेको थियो तर नीरो बाँसुरी बजाउन व्यस्त थिए । सन् ६८ मा आत्महत्याका लागि उनी मजबुर हुनुपर्‍यो । अन्त्यमा सन् ६८–६९ सम्म रोममा अराजकताले प्रश्रय पायो र गृहयुद्ध भयो ब्लग२२ माघ २०७६
सरकारलाई हेप्नी ? हँ ! मान्छेहरू सरकारको जस्तै ठूलो छाती किन पार्न सक्दैनन् ? जहाँ अपराधीले पनि न्यानो गरी बस्न पाओस्, खान पाओस्, रमाउन पाओस् । त्यो छाती जहाँ असन्तुष्टिको कुनै गुञ्जायस नहोस्, आक्रोशको कुनै बाछिटा नपरोस् ब्लग२० माघ २०७६
कुरा गर्न मन भए नम्बर दिए हुन्छ नि ! सुकिला कपडा लगाएका र मेकअप गरेकाहरूले भाडा दिँदा नछोए हुन्थ्यो जसरी दिन्छन् । कति यात्रुले ‘ओई केटा, पैसा ला । कपाल त खत्रा पालेछस्’ भनेर राजेशलाई घृणा गर्छन् । भाडा छुटका लागि जब विद्यार्थी कार्ड देखाउँथे अनि भन्थे, ‘डेट त बुझ्न सक्छस् नि केटो !’ ब्लग१८ माघ २०७६
पर्दाका डियर कमरेड र गणतन्त्रका यी कमरेड साउथ इन्डियन मुभी डियर कमरेडले माया पिरती मात्रै बोल्दैन । ‘कमरेड भनेको उपनाम होइन, जिम्मेवारी हो । कमरेडले एउटा महान् अभियान र सर्वहारा वर्गको जिम्मेवारी बहन गरेको हुन्छ,’ फिल्मले भन्छ । ब्लग२० मिनेट
एमसीसी सम्झौता : हल्ला र वास्तविकता खासगरी फेसबुकमा एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौताका केही बुँदा भाइरल भएका छन् । सुरुमा ती बुँदा हेर्दा मलाई पनि उदेक लाग्यो, कांग्रेस सरकारले मुलुकलाई तल पारेर त्यस्तो खालको सम्झौता किन गर्‍यो ? तर जब मैले सम्झौताका पूर्ण बुँदा पढेँ, धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा देखिनँ ब्लग१४ माघ २०७६
राराः एक अद्भूत यात्रा उनले अनिश्चित जवाफ दिए । नेपालगञ्जमा बिहानै पनि गर्मी छ । यस्तो गर्मीमा अनिश्चि समय बिताउनुपर्ने भएपछि साथीहरू दिक्दार देखिए । दिक्दारी प्लस डेढ घण्टा बिताउन खाजा खाने सोच बनायौँ । ब्लग . कला / साहित्य१४ माघ २०७६
सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीको मजाक छिमेकी भाइ सरोजले फेसबुकमा एमसीसीको फुल फर्म लेखेको छ– मलाई चाहिँदै चाहिँदैन । ब्लग१२ माघ २०७६
सरी ! छोरा रोश्नी मान्छे देख्यो कि चिच्याउने, कोतर्न जाने, बच्चालाई कोपर्ने, दूध नचुसाउने, खाना नखाने, रुने, एक्लै बर्बराउने गर्न थालिन् ब्लग . कला / साहित्य११ माघ २०७६
अत्याचारी शासक चितुवाभन्दा भयानक हुन्छ निश्चित रूपमा यी महिलालाई करुणा र सहानुभूति आवश्यक छ र उनी त्यसको हकदार छन् । तथापि, यिनको कुराले हामीलाई एउटा महान् सत्यसँग परिचित गरायो ब्लग८ माघ २०७६
‘तँ प्रकरण’ले उब्जाएको प्रश्न शासक तथा राज्यका निकाय र प्रतिनिधिसँग चर्को स्वरले बोल्नै नहुने, प्रश्न गर्नै नहुने, चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्नै नमिल्ने भन्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन । किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न गर्दा पक्राउ गरिहाल्ने ? जेल हालिहाल्ने ? ब्लग६ माघ २०७६
कसले बुझ्ने दुर्गमका पीडा ? अमेरिकाको सुख सुविधा नेपालमा बसेर लिन खोज्छौं तर नेपाललाई अमेरिकाजस्तो बनाउने भन्ने कुरा कहिल्यै सोच्दैनौं । यस्ता परनिर्भर बानीले हाम्रो देश झन् झन् पछाडि पर्दै गएको छ ब्लग२४ पुस २०७६
‘होलिडे प्याकेज’ लिएर इरान पनि जाने कि मन्त्रीज्यू ! हामी पीडामा भएको बेला कुनै अर्को देशका मन्त्री आएर त्यसो गरे भने हामीलाई कस्तो लाग्छ ? ब्लग२३ पुस २०७६
एक हाकिमकाे पतन-कथा म चुनावको प्रतीक्षा गरिरहेको छु । आफैँ कर्मचारीबाट राजीनामा दिएर अघिल्लो चुनावमा समानुपातिकबाट म सांसद बन्छु । अरूले दिँदै आएको पैसाभन्दा दुई गुणा पैसा निकाल्ने मसँग हिम्मत छ ब्लग१ पुस २०७६
यस कारण ठीक छ रवि लामेछानेको ‘द लिडर’ ‘द लिडर’ भएकै आधार तपाईं वडा सदस्य बन्नका लागि पनि योग्य हुनु हुन्न । ‘द लिडर’ भएको व्यक्तिले पाउने भनेको कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोजकले दिने पुरस्कार मात्रै हो । बाँकी जीवन तपाईंले नियतिको निर्मम यात्रा गर्दै आफ्नै तरिकाले जिउनुपर्छ ब्लग२७ मंसिर २०७६
हैदराबाद इन्काउन्टर : प्रहरीकाे 'कहानी' कति विश्वसनीय ? यस्ता ‘इन्काउन्टर किलिङ’मा आमरुपमा सुविधाबाट बञ्चित दलित, आदिवासी, पिछडिएको समुदायका मानिसलाई निशाना बनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय . ब्लग२१ मंसिर २०७६